Naing BSell | Item - Phone Camera Grip
Phone Camera Grip
# “PICTAR” iPhone Camera Grip # (Brand New)
iPhone Photographer တွေနဲ့ Flim Maker တွေအတွက်နောက်ထပ် ထူးခြားတဲ့ Grip လေးတစ်မျိုးထပ်မိတ်ဆက်ပါမယ် . . . အရင်တစ်ခေါက်က Beastgrip Brand လေးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် ဒီတစ်ခါ ကတော့ iPhone user တွေအတွက်သီးသန့်ပါ . . . Hardware နဲ့ Software Feature တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး တစ်ကယ့် Digital Camera လေးတစ်လုံး ကိုင်ဆောင်သုံးဆွဲနေသလို Real Hardware Button လေးတွေထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Product တစ်ခုအဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်း လဲကျစ်လစ်ပါတယ်။ အခုဒီ iPhone Camera Grip လေးရဲ့ Feature လေးတွေဆက်လက်လေ့လာရအောင်ဗျာ . . .
DSLR Camera လေးသုံးနေရသလိုထိတွေ့ခံစားရစေမယ့် “Shutter Button” ထည့်သွင်းပေးထားပြီး “Half Press” mode ဖြင့် Focus Lock နဲ့ Exposure tracking တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး “Full-press” ကတော့ shutter release လုပ်ပေးမှာပါ။
လက်ယာဘက်ရှိ Shutter Release Button ရဲ့ အောက်နားလေးမှာ Rotating Zoom Ring တစ်ခုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ် . . . လက်တစ်ဖက်ထဲကို အသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူ လျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို ၄င်း Zoom Ring ကိုဘဲ Flash, White-Balance, . . . စသည်ဖြင့် User စိတ်ကြိုက် Program ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဦးမှာပါ။ အရင်ကလို Phone Screen ကို လက်တစ်ဖက်ကကိုင်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်နဲ့ တို့လိုက်၊ ဆိတ်လိုက်၊ ပွတ်လိုက် စတဲ့ extra work တွေမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် :P
THE SELFIE BUTTON (Press to switch between front / back camera)
ဒါကတော့ ကိုယ်တွေအကြိုက်ပေါ့ “Selfie” Shot လေ :p . . . အဲ့ဒါလဲ Zoom Ring ကိုသုံးထားတာဘဲ ၊ အဲ့ဒီ Zoom Ring ကို အထဲဖိလိုက်ရင် front camera ကနေ back camera ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာလဲ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ Function ကို စိတ်ကြိုက် program ပြောင်းပေးနိုင်မှာပါ။
ဒီ Button လေးက Shutter Release Button ရဲ့ အရှေ့မှာတပ်ဆင်ထားတာပါ သူ့ကိုအသုံးပြုပြီး Brightness level ကို အမြန် ချိန်ညှိပေးနိုင်မှာပါ Manaul Mode မှာဆိုရင်တော့ ISO Value ကိုထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်။
THE “SMART WHEEL”
ဒီ “SMART WHEEL” ကတော့ Exposure Compensation Wheel ရဲ့ ဘေးမှာတပ်ဆင်ပေးထားပြီး Button အသုံးပြုမှုကို Beginners နဲ့ Advanced Photographers ဆိုပြီး (၂)မျိုးပေးထားမှာဖြစ်ပြီး ပါဝင်တဲ့ Pre-set mode လေးတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ် . . .
- Manual (iPhone manual = Shutter + ISO adjustments)
“Pictar App” ကနေ နောက်ထပ် Virtual Wheel Feature ကိုထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် Phone Screen ရဲ့ လက်ယာဘက်ထောင့်မှနေပြီး Flash modes, Shutter Speed နဲ့ ISO စတာတွေကို User ရဲ့ လက်မဖြင့် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ ချိန်ညှိနိုင်မှာပါ။
နောက်ထပ် အခြားလိုအပ်မည့် Accessories လေးတွေကတော့
- PICTAR PADDED CASE
- 1/4” Tripod Socket
- COLD-SHOE MOUNT , စသည့် Accessories လေးတွေက သက်မှတ်ထားတဲ့ Package တွေအလိုက် ထည့်သွင်းပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Packages ; CLASSIC KIT
မှတ်ချက် * * * BFF မှ နမူနာပစ္စည်း စမ်းသပ်မှာယူ ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် Company မှ Delivery Time မတည်ငြမ်သေးပါသဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် စတင်ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်မျာ....